Fonenana ao Sri Lanka ~ Journey-Assist- trano fandraisam-bahiny. trano. Tandremo
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fonenana ao Sri Lanka
Betsaka ny karazan-trano izay atofaina any Sri Lanka, miainga amin'ny trano kely misy rihana 1 any amin'ireo tanàna kely vita amin'ny fomba nasionaly ao an-toerana, miafara amin'ny fisian'ny morontsiraka marefo izay tsy hita ny ranomasina.
Inona no mamaritra ny vidin'ny fanofana trano any Sri Lanka
Ny fihenan'ny fanofa azo vetivety
Manofa trano maharitra
Ny fihenan'ny fanofa maharitra ela
Inona no mamaritra ny vidin'ny fanofana trano
Inona no antony mamaritra ny hasarobidin'ny fananana?
Faharetan'ny fanofa-trano (mety vetivety na maharitra)
Amin'ny toerana misy ny trano (faritra, faritra).
Ny fotodrafitrasa akaiky indrindra (lavitra ny faran'ny trano no fivarotana, lalana lehibe, fitateram-bahoaka, sns).
Ny faritra trano, ny isan ny efitra fandroana (mety misy efitra fandroana mahazatra 1 isaky ny gorodona na misaraka amin'ny efitra tsirairay).
Fitaovana isan-karazany (ny fisian'izy ireo na ny tsy fisian'habakabaka, fandroana fanasana, vata fampangatsiahana).
Ahoana ny fanamboarana ny fanofana (raha vita ny fifanarahana ofisialy).
Rehefa manandrana tsy hiasa izy ireo, ny tompon-trano eo an-toerana dia tsy manaiky ny hanomezana ireo mpanjifa manofa trano mandritra ny fotoana fohy, fa miaraka amin'ny fanofa-trano maharitra kokoa ry zareo.
Ny trano misy efitrano iray any Sri Lanka dia tsy mahazatra. Ny ankamaroany dia banga fandraisam-bahiny. Misy ihany koa ny efitra fandraisam-bahiny amin'ny tranobe efitrano ao Colombo.
Ny safidy malaza dia ny fihinanana antsasaky ny trano tsy miankina. Matetika ny rihana ambony amin'ny trano misy rihana roa dia manofa trano, izay misy fidirana misaraka. Amin'ity tranga ity, ny tompon'ny tranobe dia ny tenany, izay mikarakara ny faritany mifanila no mipetraka ao amin'ny rihana ambany indrindra.
Ny ankamaroan'ny trano tsy miankina amin'ny hofan-trano any Sri Lanka dia mitentina $ 350-500 isam-bolana ary hita any amin'ireo vohitra, 1-3 km miala ny morontsiraka. Tena akaiky (amin'ny halavirana latsaky ny 1 km) avy amin'ny morontsiraka no hotely indrindra lafo vidy.
Ity safidy ity dia mahazatra kokoa noho ny mihinana mandritra ny fotoana maharitra. Azonao atao ny mahita tolotra marobe miaraka amin'ny vidiny isan'andro na isan-kerinandro. Raha toa ka misy famerana momba ny fotoana farafahakelin'ny fanofana kely indrindra (ohatra, farafahakeliny 3 andro), tsy maintsy ao amin'ny fanambarana ny fampahalalana momba ireo famerana ireo.
Karazana trano hofidina mandritra ny fotoana fohy tany Sri Lanka:
Villa (safidy mety tsara ho an'ny orinasa lehibe).
Ny villa dia tsy mitovy amin'ny trano tsy miankina irery ao amin'ny dobo sy (amin'ny tranga tsy fahita firy) ny haingon-trano, serivisy fanampiny na volavolaina. Matetika ny tompon-tany miteny Rosiana dia manome tolotra tsy ampy, manakatra ny vidin'ny "status" an'ny villa irery. Amin'io fotoana io ihany, ny trano fonenan'ny tompon'ny anarana hoe "villa", amin'ny fampiharana, dia azo atao na inona na inona, manomboka amin'ny trano manankarena mandritra ny $ 200 isan'andro, ny fahazoana trano fandraisam-bahiny iray misy efitrano $ 20. Ny dikan-dalàna mahazatra amin'ny villa dia tokony ho raisina ho trano tsy miankina tsara kokoa, natao ho an'ny olona 8-12. Amin'ny tranga tsy dia fahita firy (ary amin'ny vidiny mora kokoa) dia azo aorina ny trano tahaka izany ho an'ny vahiny 2-4. Noho izany, ny manofa trano dia mahasoa ho an'ny vondron'olona mpizahatany iray.
Safidy iray tena malaza eo amin'ny mpivahiny dia hotely. Ny antony eto dia tsy vitan'ny fahazarana fotsiny ary ny fisafidianana safidy isan-karazany amin'ny kalitao samihafa (ary amin'ny vidiny samy hafa). Ny vidin'ny efitrano amin'ny hotely iray dia tena mamaritra ny faritra misy azy.
Ny bungalows koa dia karazan-trano fanamboarana trano mahazatra any Sri Lanka. Ny sasany amin'izy ireo dia manana kojakoja fanampiny hitoerana lavitra (lakozia, efitrano fandraisam-bahiny, terrace), saingy mbola vitsy ny safidy toy izany.
Tsy miparitaka be ny trano eto amin'ity firenena ity, satria vitsy ny trano any Sri Lanka izay misy rihana mihoatra ny 5. Saika ao Colombo sy any ambanivohitra metropolitan avokoa izy ireo.
Guesthouse dia vahaolana tsy mora amin'ny hotely iray. Matetika ny efitrano fandraisam-bahiny dia atolotry ny habakabaka mora kokoa raha oharina amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ka ny trano honenana dia mora vidy kokoa. Ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny dia tsy manana satelita satelita, vata fampangatsiahana, savony ary fanaka hafa.
Ny manjangan'ny fanofana trano maharitra ao Sri Lanka
Tsiahivina mafy fa hanamarina avy hatrany raha toa ka tafiditra ao amin'ny vidin'ny hofan-trano ny haba sy haba. Indraindray izy ireo dia tsy ampidirina amin'ny vidin'ny trano tany am-boalohany, ka tsy maintsy mandoa 20 na 35 isan-jato avy eo ianao avy eo.
Mazava ho azy, ny antsasaky ny trano tsy miankina (rihana iray) dia tsy afaka manofa amin'ny vidin-javatra mitovy amin'ny trano manofa ny trano manontolo, ka tokony hodinihina ny tolotra marobe mba hamaritana ny fahasamihafana.
Tena tsy ekena ny famindrana ny fandoavana mialoha ny trano hofan-trano ao Sri Lanka, ankoatra ny fampiasana serivisy iraisampirenena azo itokisana - Booking sy Airbnb. Raha tsy izany, misy ny kisendrasendra lehibe fa ny kalitaon'ny trano fonenana dia ambany noho ny nampanantenaina anao, fa tsy ho afa-miverina ny vola ianao, na tsy hahita trano na tompon-trano mihitsy.
Ilaina hazavaina haingana ny fitantanana ny serivisy manontolo, raha jerena hoe iza no serivisy ataon'ny mpiasan'ny hotely ao amin'ny resa. Nitranga izany noho ny tsy fahazoana diso na fitsa-bidy, ny mpiasan'ny hotely iray dia manondro ny karazana sakafo tsy mety, ka ny mpanjifa dia tsy maintsy mandoa fanampiny amin'ny sakafo maraina.
Raha misy ny fatiantoka, na ny fatiantoka, na ny fanesorana ny fumigator, ary koa ny tsy fisian'ny moka moka, dia tokony hahatsiaro tena hifandray amin'ny mpiasa fandraisana ianao. Tsy maintsy manampy izy ireo. Ity olana ity dia misy ifandraisany indrindra any amin'ny faritra avaratra sy afovoan'i Sri Lanka. Rehefa dinihina tokoa, tany tropikaly io izay tsy mbola potika ny mpamaritra samy hafa.
Tsy tokony hatokisana amin'ny safotra be loatra amin'ny hotely, indrindra ireo any amin'ny làlan'ny fizahan-tany malaza. Rehefa dinihina tokoa, ny tompon'andraikitra dia manana fanalahidy iraisan'ny rehetra izay ahafahanao manokatra izay azo antoka ao amin'ny trano fandraisam-bahiny.
Mandao vetivety amin'ny efitranonao amin'ny trano fandraisam-bahiny, na izany na tsy izany, tokony avelanao misokatra ny varavarankely, ary na dia kely aza ny varavarana.
Amin'ity tranga ity, azo antoka fa tsy mety ilay hotely, satria ny fijanonana isam-bolana ao amin'ny trano fandraisam-bahiny dia tsy mihoatra ny manofa trano na trano fonenana. Na izany aza, ny trano fandraisam-bahiny dia manome fihenam-bidy tsy manam-paharoa ho an'ny vahiny hitoetra mihoatra ny roa herinandro.
Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, ny fepetra manofa trano dia mampivoatra kokoa raha oharina amin'ny hotely, saingy ny kalitaon'ny efitrano matetika dia tena mahantra. Na izany aza, matetika dia mora ny mifampidinihana amin'ny mpiasan'ny trano fandraisam-bahiny momba ny serivisy fanampiny ho an'ny serivisy kely (sakafo hariva, fanasana, fanadiovana).
Ny safidy tsara indrindra ho an'ny trano maharitra any Sri Lanka dia ny manofa trano tsy miankina na rihana tokatrano iray. Ny tolotra toy izany dia mety ho hita ao amin'ny tranokala lankapropertyweb.com sy ikman.lk.
Ny mitavozan'ny trano lava-be ao Sri Lanka
Ny fifanarahana eto dia tanterahana ihany amin'ny teny anglisy. Ny fampanofana dia voatery misy fampilazana, raha tsy izany dia tsy misy hery ara-dalàna. Tsy maintsy handoa hetra amin'ny tranokara tahaka izany kosa ny tompon'ilay trano, rehefa manofa azy mandritra ny fotoana maharitra. Mazava ho azy fa mitady hisoroka izany izy, noho izany, tsy maneho faniriana hanamarina ny fifanarahana. Na izany aza, ny fampandanjalanjana ny fifanarahana ofisialy dia fepetra fiarovana lehibe ho an'ny mpanjifa, na dia mampitombo ny saran-trano amin'ny hofany aza izy.
Raha faran'izay vola marobe ny fampanofaana, dia afaka mampiasa ny anaram-badiny "ny" ao aminy ny tompon-trano. Noho izany, ilaina ny mandika ny fifanarahana ho amin'ny fiteny azonao aminao ary mitaky fanazavana momba ny teboka tsirairay avy, izay toa misalasala anao, mirakitra ny valiny omena anao ao amin'ny fifanarahana mihitsy na amin'ny anneesy ao.
Raha faran'ilay fifanekena, takiana mitovy amin'ilay vidim-piainana mandritra ny 1-6 volana. Mety misy ny olana amin'ny fiverenan'ity vola ity taorian'ny fiafaran'ny fe-potoanan'ny fampanofana, indrindra amin'ny tranga rehefa tsy nisy fanarahana ofisialy.
Raha ampiasaina ny serivisy an'ny mpanelanelana, ny mpanjifa dia voatery terena handoa isan-taona ny hofan-trano. Noho izany, ny fikarohana mahaleo tena misolo trano dia mahasoa kokoa.
Tokony hitandrina tsara amin'ny soatoavinao ianao any an-tokantranonao. Aleo aloha misoroka ny safidy fonenana mipetraka eny amoron-tsiraka.
Ny tsy fitovian'ny vidiny isam-bolana rehefa manofa mandritra ny 3 volana sy tapany taona dia tokony ho 20 isan-jato eo ho eo, toy izany koa rehefa manofa antsasaky ny herintaona sy herintaona.